Danjiraha M/Yurub ee Soomaaliya oo Garroowe kula kulmay madaxda Puntland | Sagal Radio Services
Madaxweynaha Puntland iyo danjiraha Midowga Yurub ee Soomaaliya, waxay ka wada hadleen arrimo u badan la dagaallanka burcadda badaha iyo ka taageeridda Puntland dhinaca garsoorka.
Kulanka oo ahaa mid albabadu u xirnayen ayaa Labada dhinaca waxaa wararki ay shegayen in looga hadlayey midowga yurub mashariicda ay ka fulinayso somaliya gaar ahaan Puntland kuwaas oo u badnaa dhanka la dagalanka burcad badeedka
Kulankaan markii uu soo dhamaday ayaa madaxwaynaha Puntland iyo wafdiga ka socday Midowga yurub si wada jira ula hadleen Warbaahinta Madaxwayne Faroole oo hadalka ku hormaray.
Waxa uu madaxweyne Faroole, sheegay in ay isku afgareteen qodobadii ay ka wada hadleen oo ay ka mid yihiin, gargaarka midowga Yurub ee Soomaaliya iyo la dagaallanka burcadda badaha, oo la iska kaashado.
Safiirka Midowga Yurub u qaabilsan Somalia Michele Cervone oo isna hadlayaa ayaa sheegay in ay Puntland ka taageeri doonaan barnaamij kore loogu qaadayo tayada waaxyada sharciga iyo maxkamadaha, si ay howlahooda ugu gutaan si hufan.
Danjirahan, ayaa cishooyin ka hor waxa uu Muqdisho kula kulmay madaxweynaha Jamhuurriyadda Soomaaliya Md. Xasan Sheekh Maxamuud, oo uu guddoonsiiyay waraaqihii lagu soo magacaabay.